Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaad Ka Dhan Ah Trump oo Maraykanka Ka Dhacay.
Mudaaharaad Ka Dhan Ah Trump oo Maraykanka Ka Dhacay.
Posted by ONA Admin	/ August 24, 2017
Magaalada Phoenix ee gobalka Arizona ee dalka Maraykanka ayey ka dhaceen banaan baxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo Madaxweynaha Maraykanka Trump oo magaaladaasi booqasho ku tagay.
Donald Trump ayaa xarunta shirarka ee magaaladaasi ee loo yaqaan Convention Center ku qabtay kulan ay kasoo qeyb galeen kumanaan kamid ah taageerayaashiisa, kulankaasi oo ku soo beegmay todobaad kadib markii xiisadi ka dhalatay Trump oo diiday inuu cambaareeyo kooxaha cunsuriyiinta ah ee banaanbaxyo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobalka Virgina.
Dadka ku banaanbaxayey Trump ayaa bilaabay dhagax-tuur taasi oo keentay in ciidamada booliiska ay sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadaan shacabkaasi cadheysan oo khal khal geliyey bartamaha magaalada Phoenix.
Trump ayaa khudbadii uu kasoo jeediyey magaaladaasi ku difaacay Taliyihii hore ee ciidamada booliiska ee magaaladaasi Phoenix oo lagu magacaabo Joe Arpaio, kaasi oo maxkamada xukuntay ku heshay danbiyo ah inuu si joogto ah falal isir-sooc ah ulla beegsaday dadka laga tiro badan yahay gaar ahaan Latinka.
Trump ayaa sheegay in taliyahaasi hawshiisa uu gudanayey uuna taageersan yahay ninkaasi danbiilaha ah. Donald Trump ayaa sidoo kale khudbadiisa ku weeraray saxaafada Maraykanka iyo waliba siyaasiyiinta kale ee kasoo horjeeda.